प्रधानसेनापति थापाको कार्यकाल सकिँदै, काे हुँदैछन् अबका प्रधानसेनापति? spacekhabar
प्रधानसेनापति थापाको कार्यकाल सकिँदै, काे हुँदैछन् अबका प्रधानसेनापति?
नेपाली सेनाका ४३ औं प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाकाे कार्यकाल सकिदैछ । उनी यही साउन २४ गतेबाट बिदामा बस्दैछन् । कार्यकाल सकिनुभन्दा एक महिनाअघि बिदामा बसेर आफ्ना उत्तराधिकारीलाई कार्यवाहक जिम्मेवारी दिने सैन्य परम्परा रहेकाे छ ।
नेपाली सेनाको ४४ औं प्रधानसेनापतिका रुपमा रथी प्रभुराम शर्माले नेतृत्व लिँदैनन् । शर्माले बलाध्यक्ष र बलाधिकृत दुवै रथीको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट इतिहासमा स्नातकोत्तर गरेका शर्माले भारतबाट नेशनल डिफेन्स कोर्स (एनडीसी) गरेका छन् ।
शर्मा सेनाभित्र मिलनसार मात्रै नभई ‘एक्सन म्यान’का रुपमा पनि परिचित छन् । भावी प्रधानसेनापति शर्मा सैन्य कुटनीतिमा दक्ष मानिन्छन् ।राष्ट्रिय सुरक्षामा थपिएका चुनौतीको मुकाबिला गर्नुपर्ने दायित्व पनि अब शर्माको काँध सर्दैछ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, साउन ७, २०७८, ०१:०५:००